क्लिनफिडमा गए आठ गुणाले मूल्यवृद्धि हुन्छ: सुधिर पराजुली (अन्तर्वार्ता) - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
क्लिनफिडमा गए आठ गुणाले मूल्यवृद्धि हुन्छ: सुधिर पराजुली (अन्तर्वार्ता)
दीपक भट्ट माघ ११
नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष तथा सुबिसु केवल नेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर पराजुली
क्लिन फिड लागू गर्दा विदेशी च्यानल महँगो पर्न जान्छ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको क्यान इन्फोटेकको मुख्य प्रायोजक गत वर्षहरुझैँ यो पटक पनि सुविसु केवल नेट प्रालि रहेको छ। केवल टेलिजिभनबारे सरकारी नीति, क्यान इन्फोटेकसहितका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष तथा सुबिसु केवल नेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर पराजुलीसँग नेपालखबरका दीपक भट्टले गरेको अन्तर्वार्ता:
सुबिसु केवलनेटले लगातार क्यान इन्फोटेक मेलाको मुख्य प्रयोजना गरिरहेको छ। यसको कारण केहो?
स्वदेशी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगको वृहत् प्रदर्शनीका रूपमा कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघले वर्षैपिच्छे इन्फोटेक आयोजना गर्दै आएको छ। हामीले सुरुको वर्ष प्रायोजन गर्ने बेलामा यो यात्रा लामो जानसक्छ भनेका थियौं। यसको कारण चाहिँ यो एकमात्र यस्तो प्रदर्शनी हो जसले सर्वसाधारणलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी पछिल्ला नविनतम प्रविधिबारे अद्यावधिक गर्छ। प्रविधिको क्षेत्रमा यो मेलालाई सबैभन्दा ठूलो मेलाको रुपमा लिइन्छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतीबारे पनि सर्वसाधारणलाई वषैपिच्छे सचेत गराउँदै आएको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त मेला लाग्ने वित्तिकै सर्वसाधारणले यहाँ केही न केहि नयाँ कुरा छ भन्ने आभास गर्न थालेका छन्। त्यसकारण इन्फोटेकसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिएका हौं।
यसबाट कम्पनीलाई के फाइदा भएको छ?
विजनेशमा सबैभन्दा ठूलो कुरा ब्राण्डिङ हुन्छ। त्यसपछि गुणस्तरियता र सर्वसुलभता त छँदैछ। इन्फोटेकसँग जोडिँदा एकातिर हामीलाई हाम्रो उत्पादन र सेवालाई ब्रान्डिङ गर्ने अवसर मिलेको छ भने अर्कोतिर आयोजकलाई प्रदर्शनी सफल पार्न पनि सहयोग पुग्नेछ। म आफैँलाई पनि लाग्छ कि क्यानले आयोजना गरेको मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न होस्, त्यसैले पनि मुख्य प्रायोजन गर्न हामी तत्पर रहँदै आएका छौं।
प्रायोजन गर्ने तथा नगर्ने जुनसकै सूचना प्रविधि कम्पनीका लागि यस्तो प्रदर्शनीको महत्व कस्तो हुन्छ?
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई आकार दिन सूचना प्रविधिसम्बन्धी यस्तो मेलाले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यस्तो मेला भनेको कम्पनी र उपभोक्तबीचको पुल पनि हो। ठूलो समूहमा आफ्ना उत्पादन र सेवाको ब्रान्डिङ गर्न एउटा मञ्च प्राप्त गर्नुबाहेक यस्तो प्रदर्शनीले सरोकारवालाकाबीच सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगको समग्र विकासबारे स्वस्थ छलफल पनि गराउन मद्दत गर्छ। यो प्रदर्शनी महत्वपूर्ण छ किनभने यसले कम्तिमा वर्षको एकपटक सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा भेट गराउँछ। जसबाट एकअर्काको समस्याबारे छलफल गर्न सहयोग पुगिरहेको छ। सूचना प्रविधिमा धेरै छिटोछिटो परिर्वतन आउँछ। तर त्यो प्रविधिबारे सबैले जानाकारी पाएका छन् वा छैनन् त्यसको जानाकारी दिने ठाउँ पनि यही हो। हामी कम्पनीहरुलाई पनि यस्तो मेलामा धेरै गरिने प्रश्न भनेको के नयाँ छ भनेर नै हो।
प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्किम र अफरका कारण सुबिसुले अवलोकनकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। यो वर्ष सुबिसुको स्टलमा ग्राहकले स्किम पाउन सक्छन् ?
हामी यो वर्ष पनि नयाँ अफर ल्याएका छौं। सरकारले डिजिटल टिभी सेवा सुरु गर्ने भन्ने निर्णय अब सबै केवलहरु पनि डिजिटल प्रविधिमा गइसकेका छन्। हामीले केवल डिजिटलाइजेशनको लागि अवश्यक पर्ने सेटअप बक्समा छुट अफर ल्याएका छौं। अर्को कुरा इन्टरनेटमा पनि छुट दिने घोषणा गरेका छौं। त्यस्तै इन्टरनेटमा नयँ प्रविधिपनि भित्र्याएका छौं। जसको जानाकारी लिन सर्वसाधारण मेलामा आउन सक्छन्। उनीहरुले मेलामा आएर बुझेर जानाकारी लिदा धेरै राम्रो हुन्छ।
तपाइँले डिजिटलको कुरा जोड्नु भयो, यसबाट उपभोक्ता कम्पनी तथा सरकारलाई हुने त्रिपक्षिय फाइदाको बारेमा केही बताइदिनोस् न?
ग्राहक तथा उपभोक्तलाई हुने फाइदा भनेको क्वालिटी नै हो। यो नयाँ प्रविधि हो। नेपालमा मात्रै अलि ढिला यसको प्रयोग प्रयास भयो। अरु देशमा यो भन्दा पहिले नै लागु भइसकेको छ। सरकारलाई यो प्रविधिले राजश्वमा वृद्धि गर्छ। हामीले एनालग प्रयोग गर्दा एउटाको पैसा तिरेर धेरैले उपभोग गरेका हुन्थ्ये। अब जति प्रयोगकर्ता हो ती सबैबाट राजश्व आउने भयो। हामीलाई पनि कति ग्राहक छन् भन्नेसम्म थाहा थिएन। अब त्यो सबै थाहा हुनेछ। डिजिटल टिभीमा पिक्चर र ध्वनि उच्च गुणस्तरीय हुन्छ। यसमा आफूले हेरिरहेको च्यानलमा दुई वा सोभन्दा बढी कार्यक्रम हेर्न सकिन्छ। समान्य टेलिभिजनमा समेत डिजिटल टेलिभिजनमा गुणस्तरीय दृष्य हेर्न र अडियो सुन्न सकिन्छ । यसमा टेलिभिजनबाटै म्यासेज पठाउन र पाउन, युट्यूव च्यानल हेर्न, अनलाइन गेम खेल्न पनि सकिन्छ। यसमा आफूले चाहेको कार्यक्रम रेकर्ड गरेर पनि हेर्न वा सुन्न सकिन्छ।
एनालगबाट डिजिटलमा जाँदा परेका समस्याहरु चाहि के के हुन्?
एनालग प्रविधिमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका केवल टेलिभिजनहरुलाई डिजिटलमा जान अलि खर्चिलो पर्ने भयो। त्यो कुरा कम्पनीदेखि ग्रहकसम्मले सहसुस गरेका छन्। दुई वटा च्यानल सञ्चालन गर्ने एउटा केवल टेलिभिजनका लागि कम्तिमा एक अर्ब र राम्रो सामान राखेर गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने ५ अर्बसम्म खर्च लागेको साथीहरुको कुरा पनि आइको छ।
यो प्रविधिको सुरु गर्ने कुरा चाहि कसरी भयो?
टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्ने संस्था इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू)ले सन् २०१७ को डिसेम्बरबाट एनालग प्रविधि खारेज गर्न आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई निर्देशन दिएपछि सरकारलाई डिजिटल केवल टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउनैपर्ने बाध्यता भएको हो। नेपाल पनि आईटीयूको सदस्य राष्ट्र हो।
टिभी च्यानलसँगै जोडिएको तपाइँहरुले क्लिनफिडको विरोध गरिरहनु भएको छ। यसको कारण केहो?
विदेशी च्यानलमा नेपालका लागि छुट्टै फिड उपलब्ध छैन। खासगरी भारतीय प्रसारण संस्थाहरू र नेपालका टेलिभिजन प्रसारक संस्थाहरू क्लिन फिड लागू गर्न नहुने पक्षमा छन्। क्लिन फिड लागू गर्दा विदेशी च्यानल महँगो पर्न जान्छ। विश्वमा एउटै मात्र देश सिंगापुर हो त्यहा क्लिनफिड लागू भएको छ। अन्यत्र लागू भएको देखिँदैन। विदेशीे विज्ञापन हटाउँदा ८ गुणासम्म महँगो पर्ने भएकैले हामीले विरोध गरेका हौँ।
राष्ट्रका लागि त यो नीति राम्रो देखियो नि?
सम्भव नै नभएको कुरालाई कार्यन्वयन गर्ने भनेर पनि हुँदैन। नेपालका ग्राहलाई एउटा सेटअप बक्स जोड्न त यतिसम्म गाह्रो परिरहेको अवस्थामा उनीहरुले कसरी त्यति महँगो सेवा उपभोग गर्न सक्छन्। यो नीति ल्याउनुभन्दा पहिले नेपालीहरुको स्थितिलाई एक पटक हेर्नु जरुरी छ।
केही दिन अघि मात्रै सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यो नीति लागू गरेरै छोड्ने बताएका थिए? यसको तयारी भैरहेको भन्ने कुरा छ त?
मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति खोजिरहेको भन्ने कुरा थियो। हामीले त्यसमा विरोध जनायौं। विज्ञापन एजेन्सीहरुले यो लागु गर्नु पर्छ भनेका हुन्। तर यो सम्भव छैन। उनीहरुले नेपालमा धेरै विज्ञापन उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको लागि गरेका होलान्। यदि लागु भयो भने पनि केही दिनमा यो निणर्य सच्याउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।
प्रकाशित ११ माघ २०७४, बिहिबार | 2018-01-25 12:32:46